माेरङ केराबारी । विषालु सर्पको डसाईबाट अकालमा नै ज्यान गुमानुपर्ने जोखिम बढेपछि केराबारी गाउपालिका वडा नं. ६ कालापानीका स्थानीवासीहरुको आफनै सक्रियतामा सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रको निर्माण कार्य शुरु भएको छ ।
साविकको याङशिला गाविस र हाल केराबारी गाउपालिका वडा नं ६ मा सर्पको विगविगी बढेपछि सर्पदंश उपचार केन्द्रको निर्माण शुरुगरिएको हो ।
स्थानीय प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय निर्माण समिति गठन गरेर दुई महिना अगाडिदेखि केन्द्रको भवन निर्माण शुरु भएको हो । नेपाली सेनाको कालीशक्ति गण याङ्गसिलाको पहलमा केरावारी गाउपालिका, वडा कार्यालय र स्थानीयको सक्रियतामा ८ कोठे एकतले भवन निर्माण कार्य शुरु गरिएको जनाइएको छ ।
करिब ५७ लाखको लागतमा भवन निमार्णाधिन अवस्थामा रहेको छ । यसक्षेत्रका सर्वसाधारणहरुलाई सर्पले डसिहालेमा इटहरी स्थित पूर्वी पृतना मुख्यालय यात धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुरयाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । भरपर्दो सडक नहुदा कतिपय सर्पदंशका विरामीहरुको उपचारकालागि लैजाने क्रममा बाटोमानै मृत्युहुने गरेको स्थानीय मेघराज रखल मगरले बताउनुभयो ।
केन्द्रको भवन निर्माणकालागि गाउ पालिकाको ५ लाख, गाउपालिकाका प्रमुखबाट ५१ हजार, स्थानीय शारदा ढकालबाट २५ हजार आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको निर्माण समितिका संयोजक प्रकाश श्रेष्ठले बताउनुभयो । गाउमा सर्पका जोखिम बढेपछि कालीशक्ति गण, स्थानीय बासिन्दा, गाउपालिका र वडा कार्यालयको संयुक्त पहलमा निर्माण थालनी गरेको उहाले बताउनु भयो ।
१५ धुर क्षेत्रफल जग्गामा निर्माण हुन लागेको सो उपचार केन्द्र बनेपछि भने केराबारी गाउपालिकाको २, ४, ७, ८, ९ , १० र धरान उपमहानगरपालिकाका वडा नंं. ६ का सर्वसाधारणहरु लाई पत्यक्ष फाईदा पुग्ने केराबारी गाउपालिका वडा नंं ६ वडा अध्यक्ष उपेन्द्र लुंगेली मगरले बताउनुभयो ।
भौगोलिक रुपमा समेत विकट यस क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्माण शुरु गरिएको केराबारी गाउपालिकाका प्राविधिक टीका राई बताउनुहुन्छ ।
यो क्षेत्रमा गोमन, करेट, धामन लगायतका विषालु सर्प प्रशस्त पाईने गरेको स्थानीयको भनाई छ । यस क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष लगभग ५ जनासम्मलाई सर्पले डस्नेगरेको स्थानीयवासीहरुको भनाई रहेको छ ।